Active 1+ - Sản phẩm thông minh Vsmart | VinSmart Việt Nam Homepage
၆.၁၈ လက်မ FHD+ မျက်နှာပြင်
Corning Gorilla Glass Class 5
Dual Camera 12 MP + 24 M
အကောင်းဆုံး AI Selfie 20 MP
3650 mAh ပါ အမြန်သွင်းဘက်ထရီ 4+
“ Active 1+ ရဲ့ TotalView မျက်နှာပြင်ကို အပြည့်အဝ ခံစားလိုက်ပါ။ ၆.၁၈ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်မှာ FHD+ resolution၊ Quantum color+ နည်းပညာ နှင့် မျက်နှာပြင်အချိုး ၈၆.၅၅ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုခံစားလိုက်ပါ။”
“ ဖန်သားသည် Active 1+ အတွက်ပြီးပြည့်စုံစေသော အရာဖြစ်သည်။ Gorilla Glass5နည်းပညာနှင့် တိုက်တေနီယမ်နဲ့ဖန်တီးထားသော ဖန်သားက အကြမ်းခံမှုနှင့် တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ထိပ်ပိုင်းတွင် အာလူမီနီယမ်ရောစပ်ထား မှုကလည်း အကောင်းဆုံး ကောက်ကြောင်းကိုဖန်းတီးပေးထားပါသည်။”
Tetracell နည်းပညာပါဝင်သော 12MP + 24MP ပါ Dual Camera
“ Active 1+ ဧ။် ကင်မရာသည် နေ့နှင့် ည နှစ်မျိုးလုံးအတွက် တခြားကင်မရာများထက် ရှေ့ရောက်နေပြီးဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့် 12MP x 24MP ဆန်ဆာသည် Pixel4ခုကို 1 ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းပေးသည့် Tetracell နည်းပညာ၊ စုံတွဲ PD autofocus တို့နဲ့အတူ ပြတ်သားပြီးအလင်းရောင်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကိုဖန်တီးပေးသည်။”
“ ဒုတိယကင်မရာ အကူအညီဖြင့် Active 1+ သည် Bokeh effect နှင့် မျက်နှာများကိုအာရုံခံပေးသည့်လုပ်ငန်း များကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပုံရိပ်များကို အားထည့်စရာမလိုအပ်ပဲရရှိနိုင်သည်။”
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဆယ်ဖီလ်များကိုဖန်တီးနိုင်ပါပြီ
“ Active 1+ ရဲ့ရှေ့ကင်မရာသည် ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုမဆိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သူ့မှာပါဝင်သည့် 20MP သည်2μm pixel (ပုံမှန်ထက် ၄ ဆပိုမိုတောက်ပသည့်အလင်းရောင်) ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်အောင် အဖွဲ့ ၄ ခုကိုပေါင်း စည်းထားသည်။ AI နည်းပညာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားမှုကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွင်မဆို Portrait ဖြင့်လွယ်ကူစွာရိုက်ကူးသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။”
6GB RAM နှင့်အတူ စွမ်းဆောင်ရည်
“ 6GB RAM၊ Qualcomm® Snapdragon™ 660 processor တို့နှင့်အတူ Active 1+ သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းတွင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်သွားသည်။ ဒါ့အပြင် Kryo™ နည်းပညာသည် ဘတ္ထရီစားနှုန်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာစေပြီး CABL နည်းပညာသည်လည်း မျက်နှာပြင်တွင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး ပုံရိပ်များထွက်ပေါ်လာစေရန်ဆောင်ရွက် ပေးသည်။ 3650 mAh ပါ ဘတ္ထရီနှင့် Quick Charge 4+ နည်းပညာတို့ပူးတွဲပါဝင်မှုက အသုံးပြုရာတွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်။”
အရွယ်အစား နှင့် အလေးချိန်
156.1 x 76 x 7.95 mm
FHD+ 1080 x 2246 – 403 ppi
500 nits အထိ
Corning® Gorilla® Glass Class 5
Qualcomm® Adreno™ 512 up 650 MHz
အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ နှင့် အခြားဘာသာစကားများ
အသုံးပြုနိုင်သည့် မန်မိုရီပမာဏသည် သွင်းထားသော firmware version အရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော မန်မိုရီပမာဏသည် operating system, cache memory နှင့် အခြားစနစ်များအတွက်ဖြစ်သည်။
3650 mAh, Quick Charge 4+
Samsung S5K2L8SX 12 MP + Samsung S5KX7SP 24 MP
Aperture ƒ/1.8 + ƒ/1.8 1.28 + 0.9 μm/pixel
Flash (4 LED)
Parameters’ manual setting (shutter speed, focus, ISO)
Panoramic and burst shooting modes
Samsung S5K2T7 20 MP Tetracell
နားကြပ် – HiFi and HD အသံစနစ်
စပီကာ- Smart PA
မိုက်ကရိုဖုန်း ၂ လုံး (Noise canceller)
4G+ (Cat 6):1 (2100) /2(1900) /3(1800) /4(1700/2100) /5(850) /7(2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28A (700) / 28B (700) / 38 (2600) / 40 (2300) / 41 (2500)
3G: I (2100) / II (1900) / IV (1700) / V (850) / VIII (900)
Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (dual band – 2.4 GHz |5GHz)
အနီးစပ်ဆုံးကို ဖတ်ပေးနိုင်သည့် sensor
Nano SIM ၂ ကဒ်သုံး
MicroSD™ slot, အမျိုးမျိုးသော ဖိုင်များသိမ်းစည်းရန် နေရာ၊ 256 GB အထိ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (SIM ကဒ် ၂ ကဒ်အသုံးပြုမှုအတွက်)
USB OTG Tipo-C
၂ ချက် ခေါက်နိုင်ခြင်း
ပိတ်ရန် ဖွင့်ရန် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားနိုင်ခြင်း
ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်နိုင်သော Format များ
စာသားအတွက် Format များ
ရုပ်ပုံ Format များ
ဗွီဒီယို Format များ
အသံ Format များ
SAR Values ( ရေဒီယို ကြိမ်နှုန်း တိုင်းတာသောယူနစ်)
အကြားအာရုံ အသုံးပြုမှု (0 mm)
0.166 W/kg (10 g)
ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ၅ မီလီမီတာ အကွာတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
0.515 W/kg (10 g)
*The images of the inside of the device or of the screens are simulated and are for illustrative purposes only. They may change depending on future application and/or OS updates.
Việt Nam - VI
Việt Nam - EN